Kabary mialohan'ny fanapahana ny mofo (gateau) - Informations et Actualités sur Madagascar
Culture Education Kabary mialohan'ny fanapahana ny mofo (gateau)
by Alpha world on 00 h 51 in Culture, Education
I) Fampahatsiahivana ny tantaran'ny mofo
- Fomba Malagasy hatramin’izay fa tsy fomba nentin’ny vahiny akory.
- Taloha dia nisy ny tolotra (bolongan-kena natao teo ambony ravina maintso), vary amin-dronono tondrahan-tantely, ireo fitaovana samy hafa nampiasaina izay samy manana ny heviny avokoa (lovia tanimanga…..) ireo sarin-drary (ravina isan-karazany…..)
- Ny endrika amam-bikany no niova, araka ny zava-misy nentin’ny fandrosoana.
II) Hevitra fonosin'ny mofo
- Fifamofoana: fitiavana no resahina (ny lahy no manapaka ny fitiavana ho an’ny vavy, ny vavy mandidy ny fitiavany ho an’ny lahy
- Mariazy: tokantrano no resahina (miara manapaka sy mandidy ny tokantranony). Na toy inona na toy inona karazana mofo amin’ny fanambadiana, dia mitovy ihany ny hevitra fonosiny:
Ny fifankatiavan’ny mpivady, ny fahaiza-mitondra tokatrano, ny fahaiza-mitondra ny Havana sy ny fiaraha-monina, amin’ny alalan’ny fizarana ny soa sy ny mamy. Arahina firarian-tsoa avokoa ireo rehetra ireo araka ny sarin-drary hita eo amin’ny mofomamy.
Sary asehon’ny mofo amin’ny fampakarana hanatanterahana ny firarian-tsoa:
- Azo atao ny mijery ny zavatra mandravaka ny mofo. Avy amin’izany no hanatsoahana ny hevitra (toy ny trano, rano, voninkazo)
- Ny endrika amam-bika isan-karazany:
Be fototra: tsara fototra ny fianakaviana, ny fitiavana ny tokantrano….
Efa-joro: Hahay hifandray amin’ny zorony efatra, (vazantany efatra)
Fari-bolana: Mifandray ao anantiny sy ny manodidina.
Telozoro: Tonga lafatra ny fiainana.
Fifandraisan’ny lavany, sakany, haavony, fifandeferana eo amin’ny tokantrano, fihavana eo amin’ny fianakaviana. Ho reharehan’ny fiaraha-monina sy ny firenena.
Azo atao ihany koa ny miresaka ny tsiron’ny mofo raha azo antoka ny akora nanamboarana azy. Ohatra: atody nesorina tamin’ny akorany.
Dibera avy amin’ny ronono nokapohina sy nosodihina siramamy avy amin’ny fary.
Eo am-pandinihana ireo rehetra ireo no nahafantarana fa misy ireo singa tsy nilaiana ao anatin’ireo akora ireo ka voatery nesorina.
Ohatra: ny akoran’atody, ny faikam-bary … tamin’ny fanamboarana ny mofomamy, azo ampitahaina amin’ireo toetra tsy nety taloha tamin’izy roa izany, ka ilaina ajanona, fa ilay akora nofatenana kosa dia azo oharina amin’ilay toetra mendrika iraisana ao anatin’ny tokatrano.
3. Hozaraina ny mofo: fomban’ny Malagasy hatry ny ela ny misantatra zava-baovao amin’ny fiainana.
Eto dia satry ny fiarahan’izy mivady, mizara ny soa sy ny mamy, ho an’ny fianakaviana iray manontolo, tsy hanao mizana tsindrian’ila fa hahay hampitovy ny lafi-kavana roa tonta, ho an’ny mpiarabelona ihany koa
III) Rehefa vita ny fanazavana rehetra dia miroso amin’ny fanapahana sy fandidiana ny mofo.
- Tsara raha faranana amin’ny tso-drano sy firarian-tsoa izany. Marihina fa ohatra ihany ireo nomena ireo fa ilaina ny ananan’ny mpikabary saina tonga tampoka satria miovaova ny mofomamy. (Ohotra: mofo voanjo, mofomamy misy dobera, mofomamy misy voankazo, mofomamy amin’ny ronono sy ranom-boankazo mandry…)
Santionan’ny amin’ny fanapahana sy fandidiana ny koba
(Amin’ny fotoanan’ny fifamofoana)
Ny tongolo manitra an-tsaha, ny tantely manitra an’ala, ny fitiavana manitra eto amin’ity tokatrano ity. Koa ho fanamafisana orina sy ho fanambarana am-pahabe maso izany fitiavana izany, dia manoloana ity koba ity isika ankehitriny, mitovy amin’ny mofomamy izay fahitantsika matetika amin’ny fotoana fifamofoana tahaka izao ihany ny heviny, ary fahinyaza, nisy ny vary amin-dronono tondrahan-tantely, izay natao taoanaty tsatok’aty, dia nahohoka eo ambony ravin’akondro…
Marihina fa na dia nisy aza ireo zavatra samihafa nentin’ny fandrosoana dia iray ihany ny hevitra fonosin’izy ireo. Amin’ny fifamofoana tahaka izao, dia ilay endrika ny fitiavan’izy roa, ary zava-dehibe ilay fanapahana sy fandidiana azy.
Maro ny fanamboarana ity koba ity izay novaina endrika avokoa ny ankamaroan’izy ireny. Ohatra amin’izany: ny voanjo izay nesorana amin’ny hodiny; ao koa ny siramamy izay azo avy amin’ny fary ka ny faikany izay ajanona; nisy koa ny vary izay akotry no niandohany. Henontsika, araka izany fa nisy hatrany ireo akora izay nilaina, ka nesorina talohan’ny nanamboarana koba.
Midika izany, fa samy nanana ny fomba nanabeazana azy sy ny fiainany koa izy ireo taloha, ka nesorina izay toetra tsy nety rehetra, nojerena izay marimaritra niraisina, ka lasa nitambatra ho iray. Toy ny vary sy rano, ka an-tanàna tsy mifanary, an-tsaha tsy mifandao”.
Ary hintantsika fa tsy vitan’izay ihany, fa mbola nohamafisana sy nofonosina ravina indray, ary mba nofatorana ihany koa mba tsy hivaha, midika izany fa tsara aro ny fiankatiavan’izy roa. Toy ny vary maniry eny an-doharano taninin’ny hain’andro tsy mba malazo, tsofin’ny rivotra tsy mba miraika, rarafam-panala tsy ngoly” mafy orina ny fifankatiavan’izy roa.
Rehefa ho hanintsika io koba io dia hita fa tena mamy midika izany fa mamy ny fitiavana, ary tsy amin’izao voalohany izao ihany, fa hatramin’ny farany. Ho mamy toy izany koa anie ny fitiavan’izy roa ka tsy ho toy ny tantely an-tanam-boka akory, mamy fa tsy tian-kohanina fa ho toy ny tantely manatody amim-pary, ny manatody mamy ny hanatodizana mamy. Rehefa avy eo dia ho zaraina ny koba, fa tsy ho azy irero ihany, hahay hizara ny soa sy ny mamy ho an’ny mpiara-belona aminy anie izy roa.
Tsy misy havan’ny lahy sy ny havan’ny vavy fa hanao zara mitovy lafin-kavana roa tonta.
Mitsangàna ary ianareo roa, raiso ny antsy. (Ny lahy miteny hoe “Manomboka izao dia tapahiko ho an’i ….. ny fitiavako manontolo”. Ny vavy miteny hoe: manomboka izao dia didiako ho an’i……ny fitiavako manontolo”). (Ny tsara kokoa raha niomana mialoha amin’ny teny izay ambarany izy roa, ka tsy manoro intsony ny mpikabary, fa efa manana vetsovetsom-pony izy ireo nefa ny hevitra fonosiny dia iray ihany”).
Tontosa soa aman-tsara ankehitriny ny fanambadianareo koa ny vary tsy arahin-dranonorana hono, manakofa, mamindro lavitry ny afo mangatsiaka, ny fanambadiana tsy arahin-tsodrano tsy maharitra, ka hoy izahay hoe: ho ampoky ny soa indindra anie ianareo ho sendra ny tsara maharitra, hitombo hery sy tanjaka ka ho tsara ririnina, ho soa fahavaratra, ho tomaratra fararano, ho mandin-dohataona, ho lava velona, hiadam-pinaritra.
By Alpha world at 00 h 51